Joel Robison sy ny tontolony majika sary an-tsary | Famoronana an-tserasera
Joel Robison sy ny tontolony majika sary an-tsary
Paul gondar | | mpanakanto, sary, Inspiration
Joel Robison sy ny tontolony majika sary an-tsary nahavita namorona iray manontolo izao tontolo izao surreal amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny sary miaraka amin'ny sary tsy mampino amin'ny angano. Miaraka amin'ny fomba tena madio, Miverina toe-javatra majika foana i Robison tototry ny tandindona be a fikitika melanolika amin'ny asany sasany.
Fomba manintona, vitako madio be ary famoronana tontolo manaitra tokoa fa izahay rehetra dia mitsidika foana indraindray. Hatramin'ny nanombohany, nihanahery vaika ny asany ary nitombo ny fiatraikany amin'ny Internet, na dia ny fandraisana anjara amin'ny a fampielezan-kevitra ho an'ny orinasa misotro zava-pisotro Coca-Cola.
Este Mpaka sary Kanadiana nanjary nalaza tamin'ny tambajotra noho ny kaontiny Flikr izay nanehoany an'izao tontolo izao ny fahafahany feno voalohany. Mampifangaro sary sy tontolo tena izy Joel robison mahazo miala sasatra sary nofy tena mamorona ary miaraka amina fikitika tena marefo.
Manamboara karazana toe-javatra tsy azo antoka amin'ny alàlan'ny sary sy sary, azontsika jerena avy amin'ny zavatra nivelatra tamin'ny haben'ny habeny, mandra-pahatongan'ny sary an-tsaina izay atambatra ny singa amin'ny karazany rehetra.
En ny fantsonao YouTube afaka mahita fampianarana video isika izay hanazavany ny fomba fanaovany ny sasany amin'ireo tetikasany sary. Tena mahaliana ny mahita mivantana ny fomba famoronana an'ity tontolo majika ity.
Afaka mahita ny asany amin'ny tambajotran-tserasera samihafa izahay ary mankafy ny fomba ny tetikasa tsirairay dia tantara tsy manam-paharoa miaraka amin'ny fikasihan'ny fitiavana, sakafo matsiro ary eritreritra lehibe.
Amin'ny sasany amin'ireo sangan'asany dia hitantsika matetika ny fomba maneho ny fitiavanao mamaky varavarana mamerina mamorona dia nahatonga ny fahalalana sy ny fampiasana boky ho singa ao amin'ny sariny. Mpivezivezy sy be fitiavana amin'ny natiora dia mahavita maneho amin'ny fomba tsy azo antoka ny hevitra momba ny dia sy manadihady toerana vaovao.
Taorian'ny tetikasa sary maro, rehefa nandeha ny fotoana, dia nahazo laza bebe kokoa tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy izy, noho io nahavita nandray anjara tamina tetikasa sary ho an'i Coca-Cola, ny hevitr'ity tetikasa ity dia tsotra mamorona ny tontolony fa mampiasa ny foto-kevitry ny Coca-Cola. Araka ny efa nampoizina dia namorona tontolo tsy mampino izy.
Raha tianao ny sary mamorona ary ny surreal style, Joel Robison no referansa tokony hanananao rehefa mamorona tetikasa sary toa an'io fomba io izy, izy dia aingam-panahy ho an'ny mpaka sary sy mpanakanto amin'ny ankapobeny.
Azonao atao ny mahita ny tambajotran-tserasera rehetra ao aminy:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Joel Robison sy ny tontolony majika sary an-tsary
Lora zombie mpanakanto unicorn majika maro loko